Jimicsiga fekerka muhiimka ah: xogta beenta ah iyo sababaynta
Shabakadaha bulshada, warbaahinta, doodaha ku saabsan barxadda: marar badan ayaa nala marin habaabiyaa, ula kac ama maya. Sidee lagu kala soocaa runta iyo beenta marka laba dhakhtar ay ka hadlaan iska hor imaad ku saabsan isku tallaal? Marka uu siyaasigu ku tiirsanaado tirooyin lagu qanci karo si uu u difaaco fikradihiisa?
Dhibaatadan awoowayaasha ah, waxaan jeclaan lahayn inaan ka jawaabno: qallafsanaanta maskaxeed iyo hab cilmiyeed ayaa ku filan! Laakiin miyay sidaas u fududahay? Maskaxdeena qudheedu waxay nagu ciyaari kartaa khiyaamo, maadaama eexda garashada ay inaga horjoogsato inaan si sax ah u fikirno. Xogta iyo garaafyada waxay noqon karaan marin habaabin marka si khaldan loo isticmaalo. Mar dambe yaan lagu sirin.
Waxaad tusaalooyin fudud ku ogaan doontaa waa maxay xeeladaha ay adeegsadaan kuwa qaladka sameeya ama doonaya inay ku khiyaaneeyaan. Qalab dhab ah oo loogu talagalay is-difaaca maskaxda, koorsadan waxay ku bari doontaa inaad ogaato oo aad uga hortagto sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah! Waxaan rajeyneynaa in dhamaadka koorsadan dooddaada iyo falanqayntaada macluumaadka ay isbedeli doonaan, taasoo kuu ogolaaneysa inaad la dagaallanto fikradaha beenta ah iyo sababaha kugu wareegsan.
Jimicsiga fekerka muhiimka ah: xogta beenta ah iyo sababaynta Diisambar 10, 2021Tranquillus
READ Ku Daabac Baahida: 10 su'aalood oo aad marka hore isweydiiso!
horeWax ka baro Sayniska Xogta iyo caqabadihiisa
Korodhka tooska ah ee mushaharka ugu yar 2,65% Maajo 1
Sidee loo joojiyaa turjumaada madaxaaga? - Ku fikirida luqad kale [VIDEO]
Maarso 1, 2022 – Gelitaanka dhaqangalka Qandaraaska Ka-qaybgalka Dhallinyarada